ỊGỤ AHA NA ALA IGBO - Eastern Reporter
EFCC arrests 27 graduates, students over alleged internet fraud in Osogbo, recovers 8 exotic cars
Osun monarch seeks Gani Adams’ support, presence at Osun-Ikoyi festival
Police drag Osun tax collector to court for allegedly stealing N669,000 govt’s revenue
Promptly pay state allowances to corps members, NYSC urges Osun governor
ỊGỤ AHA NA ALA IGBO
October 17, 2018 easternreporter	0 Comments Igbo, Ndigbo
Ịgụ Aha n’ala Igbo pụtara inye nwata aha, ma ọ bụ ịba aha, dịka ndị si asụ. Aha bụ ejirimara onye ma bụrụkwa ihe onye na-aza. Onye ọbụla na ihe ọbụla dị n’ụwa nwere aha e jiri mara ya, ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ; maka na onye enweghị aha nọ ọdụ ka oke osisi enweghị akwụkwọ. Ọbụnadị ụmụaka a mụrụ ọhụụ nakwa ụfọdụ ndị a ka bu n’afọ nwechakwuru aha.
N’ala Igbo, ọ kachasị n’oge elu bụ ala ọsa na oge a na-ebute ụkwa n’osi ụkpaka, bụ oge gboo; ọ na-abụ nwaanyị tụrụ ime, nwoke atụrụ echiche, ọ kachasị ọ bụrụ nwoke ọnọdụdịịrị añaa. Echiche ebe a abụghị naanị maka ihe a ga-eri, ihe a ga-eji zụ nwa, ma ọ bụ ihe nwaanyị na afọ ime ga-eje; kama otu ihe a na-echekarị n’oge ahụ gụnyere echiche aha a ga-enye nwa bịara ụwa ma o seputere isi n’afọ nne ya. E cheechaa maka nke a ga-enye ya ma ọ bụrụ nwoke, e chee maka nke nwaanyị, maka na ọ nwebeghị onye maara ihe ya bụ mbekwu gara afọ ga-azụta.
Ihe e ji ebido na gboo wee chebe echiche aha ahụ abụghị na nne na nna nwata ahụ apụghị inye ya aha ọbụla gbatara ha n’uche, kama ọ bụ maka ihi na ndị gboo ghọtara uru akpa agwụ baara eze dibịa ma ghọtakwa uru ọkpọntụ baara ụgụrụ. Ha ghọtara n’ezie na ọ bụ aha onye na-edu ya, maka na ọ bụ ihe onye kpọrọ nwa nkịta ya ka ọ na-aza ya. Ndị gboo ma uru ezi aha bara na ndụ mmadụ ọbụla, ihe aha onye pụtara, nakwa ihe aha onye pụrụ ibutere ya ma ọ bụ igbochiri ya n’ụwa ya. Ọ bụ ya mere ha ji echemi echiche ime, ma taakwa okwu eze tupuu ha agụọ nwata ọbụla aha, ka aha a gụrụ ya wee ghara iwetara ya ‘ị makwara me m eze ka ewu’ ma ọ bụ bụrụ ihe ọgbatauhie nye ya na ndụ ya.
Echiche na amamihe na-ejuputakwa n’aha ndị Igbo gụrụ mmadụ n’oge gboo ahụ maka na ha na-elechaa anya n’ihe mere na ndụ onye ahụ, ọ kachasị mgbe a dị ime ya; ihe mere na ndụ nne ma ọ bụ nna ya; ọnọdụ nwata ahụ n’ezinaụlọ ahụ, ihe a na-atụ anya ya n’aka ya; oge ma ọ bụ ụbọchị a mụrụ ya, tinyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ha na-elekwasị anya tupuu enye ya bụ nwata aha.
N’ụbọchị ahụ a ga-agụ nwata ahụ aha kpọnkwem, ihe mkpori na-ezo ka mmiri maka na a ga-eri ma ñụọọ gwoo gwoo. Ndị ezinaụlọ ahụ na-ezikwa ndị mmadụ ka ha bịa nọnyere ha ụbọchị ahụ, rie ma ñụọrọ, maka na òkù nwa enweghị iro. Ihe ndị a bụ nnọọ nke na-egosi na a kwadoro ya bụ ụbọchị nke ọma. Nke kacha nke bụ na a na-ekpekwa ekpere ụbọchị ahụ kelee Chukwu Abịama n’isi nwa bịara ụwa, ma rịọkwazie ya ka o mee ka aha nwata ahụ ghara ịbụrụ ya ihe ọgbatauhie n’ụdị ọbụla; kama, ka o si n’elu si n’ala wetere ya chi ọma.
Ṅ Nne na nna ga-eweputa aha izugbe a ga aba nwata ahụ, bụ nke onye ọbụla ga-eji mara ya. E nyechaa ya nke ahụ, nne ochie, nna ochie, nnukwu nne na nnukwu nna (n’otu n’otu) na-ewetakwa aha a ga-agụrụ ha nwata ahụ, bụ aha nke ha onwe ha ga na-akpọ ya. Onye ọbụla n’ime ha na-enyekwa nwata ahụ oke nkwụ ma ọ bụ nnukwu oke ọkụkọ, iji goro aha ahụ ọ chọrọ ịdị na-akpọ ya.
Dịka e si eme n’ebe ụfọdụ n’ala Igbo, a ga-akụkwa otu osisi n’aha nwata ahụ ụbọchị ahụ, dịka ugoro, akwụ, akị oyibo, ube, ụkwa ma ọ bụ osisi ọbụla ọzọ dị mma. Nke ahụ ga-abụ ‘osisi ala’ nwata ahụ malite n’ụbọchị ahụ. Iji ma atụ, ọ bụrụ akwụ, a ga-asị na ọ bụ akwụ ala nwata ahụ. Ọ bụkwa ya ga-enwerezị akwụ ahụ malite n’ụbọchị ahụ. Ya ga ewegidekwa ihe ọbụla mịrị na ya, ma o buo, rukwaa ụbọchị ọ nwụrụ. Ọ bụrụ na a chọghị ịkụ osisi, a ga-akpọkwasị otu osisi aha n’ụbọchị ahụ n’aha nwata ahụ, o wee sikwa otu ahụ bụrụ nke ya malite oge ahụ.
Ihe ndị a bụ otu e si eme ya bụ emumd ịgụ aha n’oge gboo. Ọ bụ ihe jọgburu udele na njọ ma sigbuokwa nkakwụ n’isi, ka ihe ndị a e jiri mara anyị bụ ndị Igbo sizị anwụnyụ anya ma na-efunahịzịkwa anyị. Ihe ndị ahụ niile bụzịkwa ihe anyị na-akpọdo isi n’ala ugbu a, wee na-emezị omenelu chee na anyị so n’egwu. A sị na onye ghara ikwe, ọ sụọ n’ala, maka na ọ na-abụ ụkpala na-ere ọkụ, o chee na ọ na-aha mmanụ.
Ndị Igbo ọgbara ọhụụ ugbu a na-emegharazị ihe ihu. Anaghịkwa emekebe emume ịgụ aha ma ọ bụ ịba aha n’ala Igbo ugbu a, ma ya fọdụzie inye nwata ahụ aha uche na amalihe dị n’ime ya. Ihe a na-amazị aka ya ugbu a bụ onye aha nwa nke nwa ya ga-akacha wee pụ iche ma ọ bụ wee da ụda na ntị.
Onye ọbụla na-achọzịkwa ka nwa ya zaa aha onye ọcha, nke ọtụtụ n’ime ha enweghị ike ịkọwa ihe ọ pụtara ma a sị ya kọwaa. E wee na-abàzị ụmụaka aha inyo, aha nkịta, aha nri, aha obodo, nakwa ọtụtụ aha ndị ọzọ uche na-adịghị n’ime ya; naanị ka e wee sị na nwa ya na-aza aha oyibo, aha onye ọcha ma ọ bụ aha pụtara ọhụụ.
A bachazie nwata aha nzuzu ndị a, ọ na-ezuzugharịzị dịka aha a kpọrọ ya siri dị; maka na ihe onye kpọrọ nwa nkịta ya ka ọ ga-aza. A naghị agharakwa n’ikwe sụọ n’ala ghara ịsụta aja. Ndị Igbo anaghịzị eji asụsụ Igbo aba ụmụ ha aha ma ọ bụ nye ha aha Igbo gbakwasịrị ụkwụ n’ihe mere na ndụ onye ahụ ma ọ bụ ọnọdụ ya na ihe gbasaara ọdịnihu ya.
N’oge gboo, ị ga-anụ aha dịka: Chijindụm, Chizaram, Anọchie, Okeke, Okafọ, Nwankwọ, Nwaanyịafọ, Chiziterem, Nnabụugwu, Chikamso, Mmadụabụchukwu, Chinenyenwa, Nkiruka, Ọdịnakachukwu, Ahamefuna, Ndidimaka, Chinụalụmọgụ, Chikwuorom, nakwa ọtụtụ ọmarịcha aha ndị ọzọ dị otu ahụ.
Mana oge ugbu a, naanị ihe a na-ahụzị bụ: ‘Chi-boy’, ‘Ebony’, ‘Martin’.’Robinson’ ‘ Nancy ‘Jefferson’ ‘Robertson’, ‘Nancy’ ‘Bridget’ ‘Jennifer’ Priscilla, Princess, Rachael, Tina, Cynthia, nakwa ọtụtụ aha ndị ọzọ dị otu ahụ, bụ nke na-enweghị ihe ọbụla ọ pụtara, na-abụghị naanị maka na ndị ọcha na-aza ya dịka aha. A na-ekwu na ọrịa ezughị okè, onye ịba a na-etokwu afọ. Onye sị sị kpụọ ya isi a kpụrụ nwa Mgbeke, ọ makwa na isi ya na nwa Mgbeke abụghị otù?
Ndị be anyị, ọ bụ ihe ọbụla anyị hụrụ ndị ọcha na-eme ka anyị ga-amụrụ sokwa ha mebe?? Ha onwe ha ọ na-asọkwa nsọ ịmụrụ nke anyị laa na be ha ga mebe?? Ka ọ bụ sọ mmụrụ ka anyị na-amụrụ?? Anyị chọchakwa ihe ndị anyị ga-amụrụ n’aka ha, ọ bụrụ ndị enweghị uru ọbụla ọ ga-abara anyị?
Doo ndị be anyị ka anyị laghachinụ azụ n’ebe anyị si, bụ ihe ndị ahụ e jiri mara anyị, ka nke anyị wee dịrị anyị. Ọbụnadị ụmụ agbọghọ anyị ndị na-akpacha anya ha gbanwee ezigbo aha ọma Igbo nne na nna ha nyere ha, ma zabazie aha ndị ọcha, sị na nke Igbo na-eme ha ihere; doonụ ka onye ọbụla selata aka ma sepu mma na akịdị maka na e jighị mma eri akịdị. Onye tụfuru aha ya nọkwa ọdụ ka onye bara kọrọ n’isi. Onye kpọọ ọba ya ọkpọkọrọ, agbatpobi ewere ya kpoo ntụ. Onye a gwara kwe, a hụ ọzọ, a gwakwa ya. Mana onye agwara agwa ma ọ nụghị anụ , o mee emee, ọ hụ ahụ; maka na nwata a na-akpọ oku n’ụlọ ọ na-agbakpu ọhịa ga-emechakwaa mara na ọhịa abụghị ebe oboibi.
Ezekwụeche Na Abatete=
← 2019: 180 Former South Eastern lawmakers take position on the choice of Obi as Atiku’s running mate
IRI JI ỌHỤRỤ/ ỊWA JI N’ALA IGBO →
Nine suspected fraudsters arrested and paraded in Oyo
Police drag Osun tax collector to court for allegedly stealing N669,000 govt's revenue
Osun monarch seeks Gani Adams' support, presence at Osun-Ikoyi festival